Induction Ukunyanga umphezulu wenkqubo-luyintoni unyango lokunyanga ubushushu?
Yintoni induction yokunyanga inkqubo yomphezulu?
Ukutshisa ukutshisa yinkqubo yokunyanga ubushushu evumela ukufudumeza ekujolise kuko kakhulu kwizinyithi ngoqheliso lombane. Inkqubo ixhomekeke kwimisinga yombane eyenziwe ngaphakathi kwezinto ukuvelisa ubushushu kwaye yeyona ndlela ikhethwayo esetyenziselwa ukudibanisa, ukuqina okanye ukuthambisa isinyithi okanye ezinye izinto eziqhubayo. Kwiinkqubo zokuvelisa zale mihla, olu hlobo lonyango lobushushu lubonelela ngokudibeneyo kwesantya, ukungqinelana kunye nolawulo. Nangona imigaqo esisiseko isaziwa kakuhle, inkqubela phambili yanamhlanje kwitekhnoloji yaseburhulumenteni eqinileyo yenze ukuba inkqubo ibelula ngokulula, iindleko zokufudumeza iindleko zokufaka izicelo ezibandakanya ukujoyina, ukunyanga, ukufudumeza kunye nokuvavanywa kwezinto.
Ukunyanga ubushushu bokungenisa, ngolawulo olusebenzisekayo kakhulu lwekhoyili eshushu yombane, iya kukuvumela ukuba ukhethe ezona mpawu zibalaseleyo zomzimba kungekuphela nje kwinxalenye yesinyithi- kodwa kwicandelo ngalinye kuloo ndawo yesinyithi. Ukuqiniswa kobukrelekrele kunokudlulisela ukomelela okuphezulu kwiijenali kunye namacandelo e-shaft ngaphandle kokuncama i-ductility eyimfuneko yokuphatha imithwalo yothuselo kunye nentshukumo. Unokwenza lukhuni umphezulu wokuthwala ngaphakathi kunye nezihlalo zevalvethi kwiindawo ezintsonkothileyo ngaphandle kokwenza iingxaki zokugqwetha. Oku kuthetha ukuba uyakwazi ukwenza lukhuni okanye ukongeze iindawo ezithile zokuqina kunye nokuqina ngendlela eya kuthi ifezekise iimfuno zakho.
Izibonelelo zoKwenziwa kweeNkonzo zokuNyanga ubushushu
Ukujonga ukuPhatha ubushushu Ukuqaqanjiswa komphezulu kugcina ukungqinisisa kwentsusa yoqobo ngelixa uqinisa indawo enxibe kakhulu yenxalenye. Indawo eqinisiweyo ilawulwa ngokuchanekileyo ngokubhekisele kubunzulu bamatyala, ububanzi, indawo kunye nobulukhuni.
Ubumbano olwenzelwe oko Ukuphelisa ukungangqinelani kunye nemicimbi esemgangathweni ehambelana nomlilo ovulekileyo, ukufudumeza itotshi kunye nezinye iindlela. Nje ukuba inkqubo ilungelelaniswe ngokufanelekileyo kwaye imiselwe, akukho msebenzi wokuqikelela okanye umahluko; Iphethini yokufudumeza iyaphindwa kwaye iyahambelana. Ngeenkqubo zikarhulumente zangoku eziqinileyo, ulawulo lobushushu oluchanekileyo lubonelela ngeziphumo ezifanayo.
Imveliso ephezulu Amaxabiso emveliso anokuphakanyiswa ngenxa yokuba ubushushu buphuhliswa ngokuthe ngqo nangoko (> 2000º F. kwi <1 yesibini) ngaphakathi kwenxalenye. Ukuqalisa phantse kwangoko; akukho shushu shushu okanye umjikelo opholileyo ofunekayo.
Ukuphuculwa komgangatho weMveliso Iinxalenye azize zidibane ngokuthe ngqo nelangatye okanye enye into yokufudumeza; ubushushu bubangelwa ngaphakathi kwenxalenye ngokwahluka kombane ngoku. Ngenxa yoko, imveliso yemfazwe, ukugqwetha kunye nokwala amaxabiso kuncitshisiwe.
Ukupheliswa kokuSetyenziswa kweMandla Ngaba udikwe kukwanda kwamatyala asetyenziswayo? Le nkqubo yodwa eyonga umbane iguqula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90 zamandla achithwe amandla abe bubushushu obuluncedo; Iibhetshi zebhetshi zihlala kuphela ngama-45% ekusebenziseni umbane. Akukho shushu sifudumeleyo okanye ukupholisa ezantsi ezifunekayo ukuze ukuma kobushushu balahleko kuncitshiswe kubuncinane obungenanto.
Imeko yokusingqongileyo Ukutshiswa kwamafutha emveli akufuneki, kukhokelela kwinkqubo ecocekileyo, engangcolisiyo eya kuthi ikhusele okusingqongileyo.
Yintoni ukutshayela i-Induction?
Ukutshisa ukunyuka yindlela yokuFudumeza engenakunxibelelana yemizimba, efunxa amandla avela kuMhlaba oMagneti oTshintshanayo, oveliswe yi-Induction Coil (Inductor).
Zimbini iindlela zokufakwa kwamandla:
Ukuveliswa kwemisinga esondeleyo (eddy) ngaphakathi komzimba ebangela ukufudumeza ngenxa yokuxhathisa kombane kwinto yomzimba
Ukufudumeza kwe-hysteresis (yezixhobo zemagnethi KUPHELA!) ngenxa yokukhuhlana kwemagnethi yemithambo yamagnetic micro (domains), ejikelezayo ngokuqhelaniswa nobume bamandla ombane angaphandle
Umgaqo wokuFudumeza ubushushu
Induction ukufudumeza umbane ihambisa yangoku (I1) kwi-coil yoqeqesho
Imijikelezo yekhoyili (ampere-turn) ivelisa umazibuthe Imigca yentsimi ihlala ivaliwe (umthetho wendalo!) Kwaye umgca ngamnye ujikeleza kwindawo yangoku-ukujikajika kwekhoyili kunye nomsebenzi
Indawo eguqukayo yemagnethi ehamba ngecandelo elinqamlezayo (elidityaniswe nenxalenye) lenza amandla ombane kwicandelo
Umbane owenziweyo udala imisinga eddy (I2) kwicandelo elihamba ngendlela ejongene nekhoyili yangoku apho kunokwenzeka khona
Imisinga ye-Eddy ivelisa ubushushu kwinxalenye
Ukuhamba kwamandla kuFakelo lokuFudumeza
Ukutshintsha indlela yangoku yotshintsho kabini kumjikelo ngamnye wexesha. Ukuba ubude buyi-1kHz, utshintsho lwangoku lisalathisa amaxesha angama-2000 ngomzuzwana.
Imveliso yangoku kunye nevolthi inika ixabiso lamandla akhawulezileyo (p = ixu), ahamba phakathi konikezelo lwamandla kunye nekhoyili. Singatsho ukuba amandla ayathathwa (Amandla aSebenzayo) kwaye abonakaliswe ngokuyinxenye (Amandla aSebenzayo) yikhoyili. Ibhetri ye-Capacitor isetyenziselwa ukothula i-generator kumandla asebenzayo. I-capacitors ifumana amandla asebenzayo kwi-coil kwaye ayithumele kwakhona kwi-coil exhasa i-oscillations.
Isekethe "i-coil-transformer-capacitors" ibizwa ngokuba yi-Resonant okanye iTank Circuit.
iindidi FAQ, Teknoloji tags ukunyanga ubushushu, Ukunyanga ubushushu, inkonzo yokunyanga ubushushu, unyango lobushushu, unyango lokushushubeza, Ukunyanga ubushushu be-HF, Ukunyanga kwamaqondo aphezulu ubushushu, unyango ubushushu rhoqo, ukunyusa ukutshatyalaliswa kobushushu, Inkqubo yokunyanga ubushushu, Ukunyanga ubushushu bomphezulu, unyango lokufudumeza umphezulu Post yokukhangela